လျှပ်ကာစီးရီးစက်ရုံ။ | တရုတ်လျှပ်ကာစီးရီးထုတ်လုပ်သူများနှင့်ပေးသွင်းသူများ
တင်းမာမှု insulator တွင်လည်း
အပူကျုံ့ Cable ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
အေးစိမ့်သော Cable ကိုဆက်စပ်ပစ္စည်း
ဘတ်စ်ကား -bar box
အပူ Shrinkable ဘတ်စ်ကား -bar ကို Tube
အဓိကထုတ်ကုန်များမှာ 220kV နှင့်နိမ့်သော voltage zinc oxide မြင့်တက်နေသော arrester၊ isolating switch, dropout fuse, electric substation bus-bar ပြွန်၊ shed booster, Cable sheath voltage limiters (box), wall bushing, 110kV နှင့် lower voltage prefabricrication, အပြည့်အဝအေးစေနိုင်သော လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်များနှင့်အပူပေးသောကေဘယ်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၊ ၅၀၀ ကီလိုဗို့နှင့်အနိမ့်ဗို့အားစုပေါင်းပစ္စည်းကိရိယာများစသည်တို့ဖြစ်သည်။
မြင့်မားသောအရည်အသွေးမြင့်မားသော Arrester လျှပ်စီး
အရည်အသွေးမြင့်တင်းမာမှုပိုလီမာခေတ္တဆိုင်းငံ့ထား insulator တွင်လည်း
Doutout Cutout မြင့်မားသောဗို့အား Compound ဖျူး
အပူ Shrinkable အကာအကွယ်အဖုံးဘတ်စ်ကားဘားပူးတွဲ Box ကို
crossarm insulator တွင်လည်း၏ပစ္စည်းများအဓိကအားဖြင့်လျှပ်စစ်ကြွေနှင့်ပေါင်းစပ်ပစ္စည်းများဖြစ်ကြ၏။ လျှပ်စစ်ကြွေ crossarm insulator တွင်လည်း Stick ၏ပုံသဏ္aာန်အတွက်ကြွေအပိုင်းအစ။ ဝါယာကြိုးပေါ်တွင် wire ကိုအထောက်အကူပြုရန် AC. ACTS အဖြစ်သတ်မှတ်သည်။ Cross-arm ၏ အခန်းကဏ္. ။ ဗို့အားမြင့်မားပါက crossarm insulator တွင်ရှိသောစက်မှုစွမ်းအားသည်မြင့်မားရန်လိုအပ်သည်။
မြင့်မားသောဗို့အားလျှပ်စစ် Composite strain pin ကို Insulator တွင်လည်း
Pin insulator တွင်ဝါယာကြိုးကိုထောက်ပံ့သည်သို့မဟုတ်ဆိုင်းငံ့ထားပြီး၎င်းသည်မျှော်စင်နှင့်ဝါယာကြိုးအကြားလျှပ်စစ်လျှပ်ကာကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။
မြင့်မားသောကာကွယ်မှုဆီလီကွန်ရာဘာ Post Composite Insulator
ပေါင်းစပ်ထားသော post insulator တွင်ဖန်ဖိုင်ဘာ epoxy ဗဓေလသစ်ပုံဆွဲလှံတံ၊ ဆီလီကွန်ရော်ဘာထီးစကတ်နှင့်ရွှေပစ္စည်းများတပ်ဆင်ထားသည်။
ယေဘုယျအားဖြင့်ခေတ္တဆိုင်းငံ့ထားသောလျှပ်ကာပစ္စည်းများကို (ဥပမာကြွေထည်ပစ္စည်းများ၊ ဖန်အစိတ်အပိုင်းများ) နှင့်သတ္တုဆက်စပ်ပစ္စည်းများ (ဥပမာ - သံမဏိခြေထောက်၊ သံထည်များ၊ အနားကွပ်များစသည်တို့) ဖြင့်ဖွဲ့စည်းထားသော (သို့) စက်ပိုင်းဆိုင်ရာပိတ်ဆို့ထားခြင်းများဖြင့်ပြုလုပ်ထားသည်။ ယေဘုယျအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လေထုအခြေအနေတွင်ပြင်ပအပူနှင့်ကာရံခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်။ overhead transmission ၏လိုင်းများ၊ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံများနှင့်ဓာတ်အားခွဲရုံများ၏ပြင်ပသက်ရှိ conductor များသည်လျှပ်စစ်ပစ္စည်းကိရိယာများကို insulator တွင်လည်းသုံးပြီးကမ္ဘာမြေမှ (သို့မဟုတ်မြေပြင်မှအရာဝတ္ထု) သို့မဟုတ်အလားအလာရှိသောအခြားလျှပ်ကူးပစ္စည်းများမှပံ့ပိုးပေးရမည်။ ကွဲပြားခြားနားမှု။
လိပ္စာ: ၆၊ Minxin လမ်း၊ lvdao စက်မှုဇုန်၊ Shijiazhuang, Hebei Province, China